किन कहिल्यै मिलेनन् पौडेल र जोशी? spacekhabar
किन कहिल्यै मिलेनन् पौडेल र जोशी?
स्पेसखबर तनहुँ, २८ पुस
गत वर्ष सम्पन्न संघीय चुनावमा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएर पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी निकै चर्चामा पुगे। निर्वाचनमा पौडेलविरुद्ध उत्रेको भन्दै पार्टीले जोशीलाई कारबाही गरेको छ।
पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही बनेका जोशी र उनका प्रस्तावक र समर्थकसमेतलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि पौडेल–जोशी विवादको चर्चा झनै चुलिएको छ। कांग्रेस तनहुँले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएको भन्दै जोशी र उनका प्रस्तावक तथा समर्थकलाई कारबाहीका लागि निर्वाचनअगावै सिफारिस गरेको थियो।
तर, पुस २४ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले तनहुँका कार्यवाहक सभापति जितप्रकाश आलेलाई पत्र लेख्दै संघीय निर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी बनेका उम्मेदवार, उनका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही भएको जानकारी दिएको छ। पार्टी निर्णयविरुद्ध उत्रिँदा जोशीसहित रामदेव पन्त र हरिशरण पण्डितसमेत कारबाहीमा परेका छन्। पौडेलविरुद्ध जोशीले बागी उम्मेदवारी दिँदा पन्त प्रस्तावक र पण्डित समर्थक बनेर सघाएका थिए। तीनैजना नेतालाई ५ वर्षसम्म साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही भएको छ।
कांग्रेस तनहुँको विस्तारित बैठकले सपार्टीको विधान र मूल्यमान्यताको मानमर्दन हुनेगरी आयोजना हुने कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्न सम्पूर्ण सदस्यलाई अनुरोध गरेको छ। बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्री जोशीले माघ ८ गते विशेष जिल्ला अधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। माघ ८ गते विशेष अधिवेशन गर्ने भन्दै जोशी समर्थकले पुस ६ गते डिल्लीराम अधिकारीको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समितिसमेत चयन गरेका छन्। अधिवेशनका लागि भन्दै जोशी पक्षले विशेष जिल्ला अधिवेशन आयोजक समितिको कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्वसहमहामन्त्री जोशीबीच कांग्रेसको इतिहासमै सुमधुर सम्बन्ध रहेनन्। उनीहरू प्रायः एक कार्यक्रममा सँगसँगै बसे पनि कार्यकर्ताका लागि नौलो हुने गर्छ। कांग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि रामप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘पौडेल र जोशी २०५१ सालको निर्वाचनमा सँगसँगै भोट मागेको देखेको बाहेक सम्बन्धमा सुधार आएन।’ त्यो बेला जोशी तनहुँ–१ मा उम्मेदवार हुँदा पौडेल जोशीकै लागि भोट माग्दै पोखरीछापमा हिँडेको भेटेको उनले सम्झिए।
‘उहाँहरू निकै कम मात्रामा एउटै मञ्चमा बसेको देखेको छु,’ उनले भने। त्यस्तै २०७४ साल वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत भानुको टुहुरेपसलमा नेता पौडेल र जोशी एउटै मञ्चमा बसेर कांग्रेसबाट भानु नगरपालिकाका मेयरका प्रत्यासी उदयराज गौलीलाई जिताउन भोट मागेका थिए। त्यसबाहेक निकै कम कार्यक्रममा मात्रै यी दुई नेता सँगसँगै सहभागी भएको कांग्रेसका कार्यकताको भनाइ छ।
पौडेल व्यास–८ स्थित बाहुनपोखरामा जन्मिएका हुन् भने जोशी भानु नगरपालिका– ११ रूपाकोटमा जम्मिएका हुन्। दुवै नेता एकै क्षेत्रका बासिन्दा भए पनि उनीहरूबीचको राजनीति सबै टकरावमा बितेको कार्यकर्ता बताउँछन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २८, २०७५, ०९:१२:००